Thola Isikhumba Esibukeka Singacindezelekile Esingacindezeli Kulezi Zinyathelo Ezi-6 Ezilula - Isikhumba
Thola Isikhumba Esibukeka Singacindezelekile Esingacindezeli Kulezi Zinyathelo Ezi-6 Ezilula
Ngabe ulwa nesikhumba esibuthuntu nesikhathele? Awunalutho ngaphandle kwakho konke ukucindezeleka nokukhathazeka okufanele usolwe. Kumele ujwayelane nabantu bakubuze kaninginingi ukuthi unjani, kahle-ke, ukungaqiniseki ngekusasa kanye nezinxushunxushu zalo nyaka owedlule nakanjani zihlangana nomzimba wakho, bese ziqala ukubonakala esikhunjeni sakho.
Sikulethela lezi zeluleko eziyisithupha ezilula zokunika amandla isikhumba sakho ukuze sikhanye:
# 1. Ukugxilisa Umkhuba Omuhle Wokulala
Umzimba wakho uqala ukulungiselela ukulala cishe ngo-9 ebusuku ngokukhiqiza i-melatonin, i-antioxidant enamandla elwa nokuvuvukala esiza ukulwa nokuvuvukala, ukugcina isigqi se-circadian futhi nokulwa nengcindezi ye-oxidative eholela ekugugeni. Ukuphazamiseka ebuthongweni kungavimbela isikhumba sakho ekukhiqizeni i-hyaluronic acid (i-hydrator yemvelo) okuholela esikhunjeni esomile nesomile.
# 2. Umsebenzi Ovela Ekhaya Awusho Ukweqa Umkhuba Wokunakekela Isikhumba
Ngenkathi usebenza kusuka ekhaya don’Tkudinga ukuthi usebenzise izimonyo, ungacabanga ngokuyeka isikhumba sokunakekela isikhumba esivamile kodwa lokho kusho ukuthi uvumela isikhumba sakho ukweqa izindlela zokulungisa ngenkathi ulele. Zama ukusebenzisa ukhilimu wokulungisa ebusuku osebenzisa isigqi sakho se-circadian futhi usize ukukhipha ithoni yesikhumba nokukhulisa ukukhanya noma olunye ukhilimu wasebusuku oqinisa isivikelo sesikhumba sakho, esivumela isikhumba sakho sibambelele kuso’Sumswakama wakho futhi unciphise ukuzwela.
# 3. Hlanganisa Indawo Yeso Ebucayi
Ukuze uthuthukise okwesikhashana ukubukeka kwemigqa emihle ngokushelela ingaphezulu lesikhumba, qinisekisa ukuthi indawo yeso lakho inamanzi amaningi futhi usebenzise ukhilimu wamehlo omuhle oswakanyisayo oqukethe i-caffeine noma ama-peptide. Ngokwengeziwe, imikhiqizo equkethe amavithamini A no-C nayo izokusiza ekukhanyiseni imibuthano emnyama ngezinga elithile.
# 4. Ukukhohlwa Ukuhlanza Akunalutho Kodwa Ubugebengu Obumelene Nesikhumba Sakho
Umoya ongaphakathi kwekhaya lakho nawo ungangcola impela, ngaphezu kwalokho, kunjalo’Skubalulekile ukususa uwoyela nesikhumba esifile esinqwabelana usuku lonke. Ukuze uthole imiphumela emihle qala ngokuhlanza okuphindwe kabili ngesihlanzi esuselwa ku-oyili esingahlanza ngokujulile futhi sisize ukuphakamisa ukungcola nokuqeda izimonyo. Yilandele ngefomula ekhomba ukukhathazeka kwesikhumba sakho njengokuphelelwa amandla kwamanzi noma ukuphuma.
# 5. Ukulwa Nobumpi Ngokunakekelwa Kobumnene
Ukusebenzisa ama-exfoliator amakhemikhali amnene kuzosiza kakhulu ekususeni ungqimba olungaphezulu lwamaseli esikhumba afile okuveza ithoni yesikhumba ekhanyayo nebala ngaphansi. Uma unesikhumba esibucayi, ukusebenzisa i-polyhydroxy acid (PHA) toner ngesikhathi sasebusika kuzokhipha ngaphandle kokukhumula ngokweqile noma ukomisa isikhumba sakho.
# 6. Don't Ukukhathazeka Thatha Ukuphefumula Okujulile!
Ukuphefumula okujulile kuzokusiza uphumule futhi uthambise isikhumba. Kubaluleke kakhulu futhi ekusebenzeni kahle komzimba wakho ngenkathi usekela yonke inqubo ebalulekile futhi okuholela ekutheni amangqamuzana akho esikhumba asebenze kangcono okusiza ukuthi isikhumba sakho sibukeke sikhulu.
Funda futhi: Izimfihlo Zobuhle Zesikhumba Esikhanyayo
kanjani ukususa izinwele ebusweni ekhaya ngokwemvelo
Ama-asanas ayi-10 e-yoga nezinzuzo zawo
izinzuzo zama-alimondi ezinwele
ungasusa kanjani izinwele ezingafuneki unomphela ebusweni
Ukudla okune-iodine e-india
izindlela zokuvimbela ukuwa kwezinwele